Score! Hero အက်ပလီကေးရှင်းကိုဒေါင်းလုပ် 2021 - အခမဲ့ - 9Apps
ဒေါင်းလုပ် XAPK（95.3MB） ယခင်ဗားရှင်း
၏ဖော်ပြချက် Score! Hero
ဒီမှာ! သင်၏ HERO ၏စိန်ခေါ်မှုအဆင့် ၈၀၀ ကျော်၏အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုကိုစူးစမ်းလေ့လာသည့်အခါအောင်မြင်သောအဆင့်သို့ Pass, Shoot & Score!
Immersive free flowing 3D Score! Gameplay သည်သင်လုပ်ဆောင်ချက်ကိုထိန်းချုပ်နိုင်သည်။ ထိပ်တန်းထောင့်ထဲသို့ဘောလုံးမှတစ်ဆင့်တိကျသောအကာအကွယ်များဖြင့်ခွဲခြားထားခြင်းသို့မဟုတ်ပြိုင်ဘက်ကင်းသောမိုဘိုင်းဘောလုံးအတွေ့အကြုံအတွက်သင့်အားထိန်းချုပ်စေခြင်းဖြင့်ထိပ်ဆုံးထောင့်သို့ရိုက်ချက်များကိုတင်ပါ။
ယနေ့ဒေါင်းလုပ် ရယူ၍ ဆော့ကစားပါ။
•အဆင့် ၈၀၀ နှင့်ရေတွက်ခြင်း။ ။ ။ ဆုတွေရမယ်၊ ဆုဖလားတွေရမယ်၊ ဂိုးတွေသွင်းမယ်၊ ကလပ်တွေပြောင်းမယ်၊ မင်းရဲ့နိုင်ငံကိုကိုယ်စားပြုပြီးဂုဏ်ကျက်သရေကိုရယူပါ။ ရမှတ်အသစ် ယခင်ကထက်ပိုမိုလွတ်လပ်ခွင့်နှင့်ဗျူဟာမြောက်ကစားခြင်းကိုခွင့်ပြုသည့်အင်ဂျင်!
•ကစားရလွယ်ကူခြင်း၊ ကျွမ်းကျင်ရန်ခက်ခဲသည်။ •ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ကောင်းသော 3D ဂရပ်ဖစ်၊ ဖြတ်တောက်ထားသည့်မြင်ကွင်းများနှင့်ကာတွန်းရုပ်ပုံများ။ > • Intelligent AI သည်သင်၏ဖြတ်သန်းမှုကိုအံဝင်ခွင်ကျဖြစ်စေပြီးတစ်ခုချင်းစီကိုမတူညီသောကစားနည်းများဖြင့်ကစားပါစေ။ •သင်၏အနီးကပ်ဆုံးသူငယ်ချင်းများနှင့်ယှဉ်ပြိုင်ရန် Facebook နှင့်ဆက်သွယ်ပါ။
Google Play အောင်မြင်မှုနှင့်ခေါင်းဆောင်ဘုတ်များမည်သူသည်ထိပ်ဆုံးရောက်နေသည်ကိုကြည့်ရန်!
• Google Play Cloud ဖြင့်ထုတ်ကုန်များအကြားတိုးတက်မှုများကိုတစ်ပြိုင်တည်းချိန်ကိုက်ပါ။
•ပါ ၀ င်မှုဇာတ်ကြောင်းကိုကစားသမားအနေဖြင့်ပုံဖော်ခြင်းနှင့်အခြားအရာများပြုလုပ်ခြင်း။
သင်၏အခွင့်အရေးများကိုယူပါ၊ ပန်းတိုင်များထားပါ၊ HERO ဖြစ်ပါစေ!
* ဤဂိမ်းသည်ကစားရန်အခမဲ့ဖြစ်သော်လည်းအပိုပါ ၀ င်သည့်အကြောင်းအရာနှင့်ဂိမ်းအတွင်းပစ္စည်းများကိုအစစ်အမှန်ငွေဖြင့်ဝယ်ယူနိုင်သည်။
* ဤအက်ပ်သည်ဂိမ်းအကြောင်းအရာနှင့်ကြော်ငြာကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်ဝိုင်ဖိုင် (သို့မဟုတ်) ရှိလျှင်မိုဘိုင်းဒေတာကိုအသုံးပြုသည်။ ဤဂိမ်းတွင်မိုဘိုင်းဒေတာအသုံးပြုမှုကိုချိန်ညှိချက်များ / မိုဘိုင်းဒေတာအတွင်းမှပိတ်နိုင်သည်။
* ဤအက်ပ်တွင်တတိယပါတီကြော်ငြာရှိသည် သင်ဆိုင်မှဂိမ်းငွေကြေးကို ၀ ယ်ပါကတောင်းဆိုမှုမရှိသောကြော်ငြာကိုပိတ်ထားပါ။ US WATCH US: youtube.com/firsttouchgames
ဘာအသစ်လဲ Score! Hero 2.75
⚽Score Hero 2,Soccer Star 21,Soccer Superstar,Football Strike,Football Rivals,Score Match,Score Hero